Antoine Griezmann oo tababarkiisii ugu horreeyey la qaatay kooxdiisa cusub ee Barcelona… + SAWIRRO – Gool FM
(Barcelona) 15 Luulyo 2019. Antoine Griezmann ayaa maanta tababarkiisii ugu horreeyey la qaatay kooxdiisa cusub ee Barcelona.
Barcelona ayaa Jimcihii la soo dhaafay si rasmi ah ugu dhawaaqday inay weeraryahanka Faransiiska ee Antoine Griezmann kala soo wareegtay kooxda Atletico Madrid kaddib markii ay bixiyeen lacagta lagu burburin karay qandaraakiisa Atletico.
Kooxda xafidanaysa horyaalka La Liga ee Barcelona ayaa bixisay lacagta lagu burburinay qandaraaska Griezmann oo gaareysay 120 milyan euro.
28-sano jirkaan Griezmann ayaana si rasmi ah u noqday ciyaaryahan kooxda Barcelona, waxaana uu kooxda qalinka ugu duugay qandaraas shan sanadood ah oo lagu burburin karo 800 oo milyan oo euro.
Maalintii shalay ayey kooxda ka arrimisa garoonka Camp Nou waxa ay Antoine Griezmann gacanta ka galisay lambarka cusub ee uu u xiran doono Barca xilli ciyaareedka cusub ee 2019-20, waxaana uu lambarkasi ahaa lambarka 17-aad.
Xiddigan xulkiisa Faransiiska kula guuleystay Koobkii Adduunka 2018 ayaa haddaba maanta tababarkiisii ugu horreeyey la qaatay saaxiibada cusub ee kooxdiisa Barcelona.